गंगाजमुना गाउँपालिकामा दुई दिने घुम्ती शिविर, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण – Everest Times News
गंगाजमुना गाउँपालिकामा दुई दिने घुम्ती शिविर, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण
२०७६ पुष १, मंगलवार २१:२५
धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिकाको आयोजनामा २ दिने एकिकृत घुम्ती सेवा शिविर सम्पन्न भएको छ । गंगाजमुना गाउँपालिका को वडा नं.१ ताजिम्राङ र वडा नं. २ को ताकलमा दुइ दिने एकिकृत घुम्ती शिविर सम्पन्न भएको हो । नागरिकहरुलाई गाउँमै सेवा प्रवाह गर्ने उदेश्यले शिविरको आयोजना गरिएको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय विनोद रोकाले जनाकारी दिए।
शिविर समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गाउँपलिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विनोद रोकाले गाउँपालिकाका भित्रका विकट क्षेत्रमा पर्ने वडा नं. १ र २ का नागरिकहरुलाई सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्नेको लागि शिविरको आयोजना गरेको बताए । शिविरकै अवसर पारी वडा नं. १ र २ मा मेलमिलाप केन्द्रको स्थापनाका साथै मेलमिलाप समिति पनि गठन गरीएको समेत रोकाले जानकारी दिए।
शिविरबाट वडा नं. १ र २ को गरी २ सय ४५ वटा जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र, ३३ वटा अपाङ्गता परिचयपत्र, १७ वटा व्यवसाय दर्ता तथा ६ वटा योजना सम्झौता कार्यपत्र वितरण गरिएको छ । शिविरमा जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको गाउँपालिकका चिकित्सक मार्फत स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एन्जिला तामाङले बताइन् ।
शिविरको समापन समारोहमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एन्जिला तामाङ, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विनोद रोका, गाउँपालिकाका चिकित्सकहरु र योजना अधिकृतको टोलीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।